DEG DEG: Chelsea oo dhammeystirtay Saxiixii ugu horreeyay Janaayo….(Laacib la isku heystay oo ay Gacanta ku soo dhigtay) – Gool FM
DEG DEG: Chelsea oo dhammeystirtay Saxiixii ugu horreeyay Janaayo….(Laacib la isku heystay oo ay Gacanta ku soo dhigtay)
Byare January 2, 2019
(London) 02 Jan 2019. Chelsea ayaa dhammeystirtay Saxiixeedii ugu horreeyay Suuqa Janaayo iyadoona gacanta ku soo dhigtay xiddig ay isku heysteen kooxo badan.
Blues ayaa 58-milyan kula soo wareegtay Christian Pulisic ee u ciyaara kooxda Borussia Dortmund.
Xiddigan u dhashay Markeykanka oo lala xiriirinayay kooxo waa wayn ay hormuud u ahayd Liverpool ayaa dib amaah loogu celin doonaa kooxdiisa Dortmund ee dalka Jarmalka halkaa uu ku soo dhammeysan doono xilli ciyaareedka inta ka harsan.
Laacibka ka ciyaara garabka Weerarka ayaa noqday xiddiga saddexaad ee ugu qaalisan taariikhda kooxda reer Germany.
Warbixin ay Dortmund soo saartay ayay ku sheegtay in Riyada Christian Pulisic ay had iyo jeer ahayd inuu ka ciyaaro Premier League, waxay kaloo sheegeen in maadaama ay awoodi wayeen inay heshiis cusub ka saxiixdaan ay go’aansadeen inay aqbalaan dalab qaali ah oo kaga yimid kooxda reer London.
Cabsi horleh oo ku aadan Eden Hazard oo soo wajahday Chelsea...(Maxaa soo kordhay?)
Mesut Ozil oo ka hadlay sababta uu kaga maqnaa kulankii xalay ee Fulham